Madaxweynaha Somaliland oo Wasiiradii Waxmatarayaasha eryay- laakiin kuwa beeshiisa ku dhici waayay
Topnews:- Madaxweynaha Siilaanyo oo Wasiiradiisii Waxmatarayaasha eryay- laakiin kuwa beeshiisa ku dhici waayay
25 June 2013 Waagacusub.com-Madaxweynaha Somaliland Mr Ahmed Siilaanyo ayaa eryay qaar ka mida Wasiiradiisii astaanta u noqday been iyo waxmatarenimada hasse yeeshee wuxuu ku dhici waayay inuu xilka qaadis ku sameeyo kuwa u dhashay beeshiisa Habar jeclo.
Wasiirkii Arrimaha dibadda Mohamed Bajaaj oo ka tirsanaa Wasiirada waxmatarayaasha Somaliland una dhashay beesha Habar awal gaar ahaan Sacad Muuse ayuu xilkii ka xayuubiyay wuxuuna ka dhigay Wasiirka Ganacsiga. Wasiirkii Arrimaha gudaha Mohamed Duurjaan oo safka hore uga jiray Wasiiradda astaanta u noqday beenta,faanka ,laaluush ku shaqeeynta iyo aqoondarada una dhashay beesha Garxajis gaar ahaan Habaryoonis Muuse Cabdalle, ayuu eryay Madaxweyne Siilaanyo.
Mohamed Duur oo Wasaaradda Arrimaha gudaha ka dhigay Wasaarad laga hayaamay wuxuu Somaliland dhex wareegeysan doonaa isagoo xambaarsan dakanooyin qabiil iyo mid shaqsi.
Wasiirkii hoowlaha guud iyo guryeeynta Ahmed Abdi Xaabsade oo u dhashay beesha Dhulbahante balse la deeyriyay ayey seefta qaaday.
Ahmed Abdi Xaabsade oo ka mida Siyaasiyiinta ugu caansan Somalia wuxuu yax yax iyo karaama daro kula noolaan doonaa Hargeysa isagoo ku magacaaban La-taliyaha Mdaxweynaha ee Arrimaha Doorashooyinka iyo Asxaabta.
Wasiirkii Warfaafinta iyo Wacyigelinta Somaliland Abiib Timacade oo xilkaas loo magacaabay markii laga qaaday rug cadaaga weyn ee Boobe Yusuf,oo ay isku yihiin beesha Sacad Muuse ayaa xilkii laga eryay,waxaana loo magacaabay Wasaarad Maqaarsaara ,oo aan shaqeeyn.
Abiib Timacadde oo la rumeeysan yahay inuu ka dambeeyay dilkii Macalimiintii beesha Samaroon ee lagu khaarijiyay intii u dhaxeysay Dila iyo Gabiley,lama oga inuu aqbali doono xilkaas lagu sabaaliyay hasse yeeshee wuxuu safka hore uga jiray Wasiirada maamulayay Wasaarada ay aqoon u laheyn.
Madaxweyne Somaliland wuxuu ku dhici waayay inuu eryo Wasiiradii astaanta u noqday Musuqmaasuqa,Cadaalad darada,waxtar xumada iyo qabyaalada ee beeshiisa Habar jeclo kuwaas oo ay ka mid yihiin Hersi Haji Ali iyo Mohamud Hashi, Hasse yeeshee wuxuu magacaabay Wasiiru Dowlaha Madaxtooyadda.
Digreetada xilka qaadista iyo magacaabista ee Madaxweyne Siilaanyo soo saaray ayaa u qorneed sidaan:-
Sidaa waxa uu lagu sheegay Qoraal caawa laga soo saarey Madaxtooyada Somaliland,
Markuu Arkay: In baahi loo qabo buuxinta jagooyinka Wasaaraddahan JSL;
In laga bilaabo taariikhda maanta masuuliyiintan uu Madaxweynuhu u magacaabay xilalkan.
S/No. Title-ka Magaca
5. Wasiirka Wasaaradda Boosaha iyo Isgaadhsiinta Maxamed Jaamac Abgaal
10. Wasiiru-dawlaha Nabadaynta iyo Horumarinta Gobollada Bari ee JSL Cali Maxamuud Axmed (Sandule)
7. Wasiirkii Hore ee Wasaaradda Hawlaha Guud, Guriyeynta iyo Gaadiidka waxa loo magacaabay (La-taliyaha Mdaxweynaha ee Arrimaha Doorashooyinka iyo Asxaabta) Axmed Cabdi Maxamuud (Xaabsade)
wasaaradaha cusub ee iyagu ku soo biiray xukuumada waxa kamid ah
Waxaa Ku Soo Biiray Wasaarado Cusub.
1.Wasiirka Wasaaradda Biyaha Xuseen Maxamed Cabdille.
2. Wasiirka Wasaaradda Xidhiidhka Goleyaasha, Cilmi Baadhista iyo Technology-yadda Aaden Axmed Warsame.
5. Wasiir Ku-xigeenkii Hore ee Wasaaradda Ganacsiga Aaden Diiriye Cigaal